China Rock Wool Insulation Boad ifektri nabakhiqizi |I-Kingflex
Ukulahlekelwa ukushisa okuncane
Izikweletu zamandla aphansi
Isakhiwo sesakhiwo esivikelekile
Ukushintshashintsha kwezinga lokushisa eliphansi
Izinkinga ezimbalwa zokuswakama
I-Kingflex rock wool insulation board isetshenziswa kakhulu odongeni lwangaphandle.Ihlangene nophahla, yakha imvilophu yanoma yisiphi isakhiwo, ivikela wonke umuntu nakho konke okungaphakathi.
Aphinde amboze indawo enkulu kakhulu, okuwenza abe indawo eyinhloko yokuvimbela ukulahlekelwa ukushisa.Indawo eyinhloko lapho kulahleka khona ukushisa ngokuphuma ezindongeni ezingavalekile kahle.
NgeI-Kingflex ibhodi lokufakelwa koboya betshe, izindawo zokuhlala zingenziwa zifudumale, zisebenzise amandla futhi zihambisane nezindinganiso zesimanje zokwakha - kanye nokuthola izinzuzo ezengeziwe mayelana nama-acoustics, induduzo yasendlini nokuphepha komlilo.
Zitholele ukubaluleka kokugqumisa ezindongeni zangaphandle, kanye nemithelela emihle engayiletha.zinezinzuzo eziningi ezifana nesisindo esilula, ukusebenza kahle okuphelele kanye ne-coefficient ephansi ye-conductivity yokushisa.Kunjalokabanziesetshenziswa ekwakheni nokunyeizimboniemkhakheni wokulondoloza ukushisa.Iphinde ibe nomsebenzi omuhle wokumunca umsindo, ngakho-ke ingasetshenziswa ukunciphisa umsindo wezimboni futhi ibhekane nokumuncwa komsindo ekwakheni.
I-Kingflex rock wool ikhiqizwa nge-basalt yemvelo njengento eyinhloko, encibilika ekushiseni okuphezulu futhi yenziwa ama-abio-fiber okwenziwa ngesivinini esikhulu.i-centrifugalimishini, bese yengezwa ngama-agglomerate akhethekile kanyeuthuliuwoyela, ashisiwe futhi aqiniswe abe yimikhiqizo egcina ukushisa ye-rock wool ehlukahlukene ngokucaciswa okuhlukile ngokuya ngezidingo ezahlukahlukene.
Amabhodi e-rock wool amabhodi e-rock wool angangeni amanzi
usayizi mm ubude 100 ububanzi 630 obukhulu 30-120
ukuminyana kg/m³ 80-220
Ibhodi le-Kingflex rock wool insulation board liyisisekelo sokuthuthukisa izindonga ezonga amandla, futhi lihlangabezana nezidingo zekhodi yesimanje ngokuhlinzeka ngokufaka ukufakwa okuqhubekayo kwezakhiwo zokuhlala, ezohwebo nezimboni.
Okwedlule: i-rock wool i-thermal insulation blanket
Olandelayo: i-rock wool thermal Insulation Pipe
I-Rock Wool Boad
I-Rock Wool Comfort Board
I-Rubber Thermal Insulation Board
I-Kingflex Rubber Foam Insulation Sheet Roll